TIDE: Wadashaqeyn kooxeed, Ka mid noqosho, Wafti, Naxariis | Martech Zone
Isniin, November 6, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan aqriyay buugaag dhowr ah oo dhawan (dhanka midig). Labada buugba waa buugaag waaweyn oo looga adkaado qaar ka mid ah dhinacyada xun ee ganacsiga.
Tani waa marki labaad ee aan aqrinayo “Jaceylku waa Dilka App”. Waa inaan aqriyaa dhowrkii biloodba mar. Waxaan jeclahay inaan ka fikiro 'hippy' buugaagta ganacsiga. Runtii waxay ku saabsan tahay inaad xiriir weyn la yeelatid dadkaas kugu hareeraysan. Ka walwal dadka marka hore, markaa uma baahnid inaad ka walwasho ganacsigaaga.
Silos, Siyaasadda iyo Dagaalkii Cows waa buug aad u fiican sidoo kale. Xaqiiqdii waxay ku saabsan tahay ka weecinta dareenka shaqaalahaaga midba midka kale isla markaana diirada saaraya yoolalka guud ee ururka.
Waxaan la imid erey gaabin u gaar ah oo muujinaya labada buug… TIDE
Wada shaqeynta - u shaqeynta koox ahaan waxay bixisaa wax iibsasho iyo hufnaan. Jooji geeddi-socodka dhiirrigeliya is-qab-qabsiga iyo siyaasadda. Dadka aan ka shaqeyn karin koox koox ma fiiriyaan shirkadda, waxay fiirinayaan naftooda. Kireyso oo dhiirrigeli ciyaartoyda kooxda.
Ka mid noqoshada - oo ay ku jiraan macaamiishaadu (gudaha iyo dibaddaba) had iyo jeer waxay hagaajinayaan tayada alaabadaada iyo adeegyadaada.
Wufuud - u oggolow khubarada aad shaqaaleeysay inay go'aan ka gaaraan oo ay la xisaabtamaan.
Naxariis - fahan isbaarooyinka, dhibcaha xanuunka, iyo waxqabad la'aanta ururka una damqasho macaamiishaas iyo shaqaalaha ay tahay inay u dulqaataan.